Ukuba ufuna anayithathela zahlangana a kubekho inkqubela ufuna ngokwenene njengaye, ifumana yakhe inombolo yefowuni kusenokuba ebalulekileyo kanti daunting msebenzi. Ungaziva nervous, kodwa oku akuthethi ukuba kufuneka kuba enzima okanye ama-nkqubo. Eyona ndlela ukufumana kubekho inkqubela ke inombolo yefowuni kukuba ngokulula charm yakhe nge-attentive incoko kwaye buza umsebenzi wakhe amasuntswana ngqo, ngexesha avoiding pitfalls njenge tricking yakhe okanye ukufumana abahlobo bakho ukwenza umsebenzi kuba ufuna. Ngo staying zolile kwaye uqinisekile, uza kusenokwenzeka ukuba enze okulungileyo impression. yi-phinda iyafana amanani omhla we, oko kuthetha ukuba abaninzi bethu amanqaku abhaliweyo collaboratively? Ukwenza eli nqaku, abantu, abanye ongaziwayo, isebenza ukuhlela ukuphucula ngayo ngokuhamba kwexesha. Eli nqaku zibonakele bazibona sele, phinda-phinda. Ukuba ufuna anayithathela zahlangana a kubekho inkqubela ufuna ngokwenene njengaye, ifumana yakhe inombolo yefowuni kusenokuba ebalulekileyo kanti daunting msebenzi. Ungaziva nervous, kodwa oku akuthethi ukuba kufuneka kuba enzima okanye ama-nkqubo. Eyona ndlela ukufumana kubekho inkqubela ke inombolo yefowuni kukuba ngokulula charm yakhe nge-attentive incoko kwaye buza umsebenzi wakhe amasuntswana ngqo, xa avoiding pitfalls njenge tricking yakhe okanye ukufumana abahlobo bakho ukwenza umsebenzi kuba ufuna. Ngo staying zolile kwaye uqinisekile, uza kusenokwenzeka ukuba enze okulungileyo impression. Kufuneka relax phambi kwenu kwa indlela i kubekho inkqubela. Nkqu ukuba uyazi ukuba ufuna ukufumana yakhe inani msinyane kangangoko ufuna ndawo kwayo, uphumelele khange nako ukuyenza ukuba wena musa chill ngaphandle kuqala. Yena uza kukwazi evakalayo ukuba ukhe ubene nervous ukusuka imayile kude, kwaye ukuba ukhe ubene nervous, yena uya kuba nervous kakhulu okanye mhlawumbi scare yakhe ngaphandle. Nangona ke eqhelekileyo ukuba ube nervous ukuba ukhe ubene ndinovelwano scared okanye ukuba neentloni, kubekho inkqubela babe nimangaliswe, ‘Yintoni phezulu kunye le guy.’ Yena babe ucinga ukuba kukho into ngaphandle malunga nani nkqu ukuba ukhe ubene ekubeni i-nokuqheleka ityala le-jitters. Zolile ngokwakho phantsi ngo kokuqwalasela eyona imbi-kunjalo, kwimeko yesi. I-eyona imbi into ukuba ingaba kwenzeka lento: ucela kuba yakhe inombolo yefowuni, kwaye yena uphumelele ukuba amnike yona. Ungakwazi ukuze siphile.
Xa ufuna anayithathela calmed phantsi, ke ixesha elizayo phezulu ukuya cutie kwaye crank phezulu charm. Yenza iliso uqhagamshelane, ncuma, kwaye kunyuka yakhe ukubonisa wakhe into enkulu guy ufuna. Ukuba ufuna ukugcina yakhe uthetha, kufuneka wenze elikhulu kuqala impression njengoko kamsinya kangangoko kunokwenzeka. Nantsi indlela yokwenza oko: Kuba uqinisekile. Bonisa wakhe ukuba ngaba uthando ngubani na kuni ngabo, ukuba ukhe ubene ndonwabe kunye ntoni ukwenza, kwaye ukuba ngaba uthando intlanganiso entsha abantu. Ukuba yena thinks uziva okulungileyo malunga abo awuqinisekanga, yena, ukuva okulungileyo malunga nawe kakhulu. Chances ngabo, yena uya kuba onemincili xa yena ufumana ngaphandle unomdla kuyo, kuyinikela yonke ingqalelo yakho. Oku akuthethi ukuba kuthetha ukuba kufuneka creepily stare kwi yakhe amehlo. Ikwenza kuthetha ukuba ungavula umzimba wakho kwiintlanganiso yakhe, ubeke yefowuni yakho kude, kwaye enze yakhe khangela ukuba yintoni yena uthi imicimbi kuwe. Xa ufumana izakhelo ngaphandle indlela, thanda amagama kwaye apho ukhe ubene ukususela, kufuneka qala ukudibanisa kunye kubekho inkqubela kwi-nzulu inqanaba. Oku akuthethi ukuba kuthetha ukuba kufuneka ucele kuye malunga yakhe ubomi philosophy okanye malunga uninzi kubalulekile amava wakhe lwabantwana abancinane, kodwa ke ingaba ithetha ukuba kufuneka yiya elidlulileyo isihloko. Nantsi indlela yokwenza oko: Buza yakhe eminye imibuzo malunga herself. Musa enze udliwano-ndlebe naye. Nje buza malunga yakhe nabantakwethu, malunga ifilim yena ke ubonile, okanye ngubani yena thinks wakhe umsebenzi. Vumelani yakhe khangela ukuba ufuna care malunga yakhe opinions.
Qiniseka ukuba ukhe ubene kunye uthetha malunga elinye isixa-mali. Wena musa ufuna ukuba ubeke uxinzelelo yakhe nge-ecela ezininzi imibuzo ngaphandle revealing nantoni na malunga ngokwakho, kodwa kufuneka shouldn khange hog incoko noba.
Xa ufuna ukwakha elungileyo rapport, qala kwi playfully ukwenza fun wakhe kancinci. Ukuba yena ke wearing i-ngokuqinisekileyo decorative chunky igolide necklace, ndiwubambe ndithi, ‘ukuba real egolide.’ Compliment yakhe. Musa zibalisa wakhe yena ke ebukeka umfazi kuwe anayithathela ngonaphakade eboniweyo. Nje zibalisa wakhe yena sele an amazing laugh, okanye ukuba kuye amehlo ingaba abasebenzi abaqhankqalazayo. Musa yiya overboard. Qiniseka ukuba uhlale elihle. Xa ufuna anayithathela bafudukela elidlulileyo isihloko kwaye kufuneka charmed yakhe xa kuqaliswayo, ke ixesha ukufumana wakhe ukuba njenge nani ngokwaneleyo ukuba ufuna ukuchitha ixesha kunye naye kwakhona. Yena akuthethi ukuba ingaba ucinga ukuba ukhe ubene umntu yena ke ukuba ulinde zonke yakhe ubomi bonke yena sele ucinga, ‘Heee, le guy ngu elihle. Ndifuna ngakumbi oku.’ Apha ke njani ukufumana wakhe ukuba ufuna ukubona kuni kwakhona: Ukwakha witty banter. Bonisa wakhe ukuba ungathanda ukuba tease yakhe, kuba yakhe tease kwenu, kwaye bayigcine phezulu yakho end a bukhali incoko. Ukuba yena uthi into funny, impendulo umva nge funny quip endaweni nje laughing isithi, ‘Ukuba ke funny.’ Oku kuya kubonisa wakhe ukuba uyakwazi ukugcina phezulu abayo ukuba beka phantsi ngaphandle kwakhona. Tyhila into kancinci ngakumbi lobuqu. Musa get ngoko ke personal oziveza yakhe uncomfortable kodwa zibalisa wakhe into lonto yenza intliziyo yakhe inyibilika nje kancinci kwaye sibone ukuba ukhe ubene hayi nje konke malunga jokes, kodwa ukuba ufuna ngokwenene kukwenza ube mhlophe icala. Ingaba wakhe vula phezulu kuwe. Lean kwi-kancinci kukufutshane kwaye ukhuthaze wakhe ukuba ndinixelele into malunga herself ukuba yena akubonakali uyixelele nje nabani na. Qalisa ukwakha nomdla udibaniso. oku ukuba yenze ngokuchanekileyo. Ukuba into ukususela ekuqalekeni ukusuka incoko yakho iza phezulu kwakhona, uyakwazi impress yakhe ngokubonisa ukuba bniyakhumbula yonke into yena utshilo. Sukulinda kuba izinto isemva, okanye uza kuphulukana nayo. Nje xa nisolko ekubeni kakhulu fun uthetha ukuba kubekho inkqubela, okanye xa nisolko laughing i-hardest, kanye kanye xa kufuneka ucele. Xa ngaba ukufikelela incopho apho ucinga ukuba, ‘ndiza ekubeni enjalo omkhulu ixesha uthetha ukuba oku kubekho inkqubela ukuba akunyanzelekanga ukuba nkqu ufuna phazamisa ngayo yi-ukucela yakhe inombolo yefowuni,’ kufuneka ucele ngoko nangoko. Nazi ezimbini eyona iindlela ukwenza oku: Buza yakhe ngaphandle. Endaweni ukucela yakhe inombolo yefowuni, buza yakhe ngaphandle kumhla. Kwi-ephakathi enkulu, incoko, nje ndithi, ‘mna kufuneka ahambe, kodwa mna ngenene ufuna ukugcina phezulu le incoko phezu sangokuhlwa okanye drinks iveki elandelayo. Ungathanda ukuba.’ Ukuba yena uthi yena ungathanda ngayo kwaye ukuzothi ga, yena kufuneka ke kufuneka buza umsebenzi wakhe inani kuququzelela. Buza umsebenzi wakhe inani ngqo. Nje xa incoko ngu ke ngokunjalo oko uyakwazi, ndithi, ‘Heee, mna ngenene ngathi uthetha kuwe. Unako ndifumana yakho inani, ngoko ke sinako gcina uthetha.’? Ndiyicacise ukuba ukhe ubene ukucela yakhe inani ngenxa yokuba ufuna beka phantsi ngaphandle kwakhona, hayi kuba ufuna ukuthumela yakhe creepy okubhaliweyo okanye ngenxa yokuba kufuneka ufumane rush ukusuka yokufumana girls’ umnxeba amanani. React appropriately. Musa nje kwaye pump yakho fist emoyeni kwaye ndithi, ‘Ewe.’ xa yena oninika kuyo inani. Nje ndithi, ‘comment, imibulelo,’ uze umxelele wakhe uza umnxeba yakhe ngokukhawuleza. Ngoko ke ndithi goodbye wahamba ngaphandle kunye yakho intloko igcine phezulu. Kwaye ukuba yena uthi hayi, shrug ngayo ngaphandle kwaye ndithi ke ayisosine ingxaki yaba likhulu ukuya kuhlangana naye phofu. Ukuba ufuna ndawo i-absolutely gorgeous kubekho inkqubela, okanye nje kubekho inkqubela abo ikhangeleka ngoko aph okanye charming ukuba ufuna ukwazi yakhe ngcono, ngoko ke ayikwazanga kwenzakalisa ngokukhawuleza buza umsebenzi wakhe inani. Ukwenza oku kwi-ezimbini imizuzu, kufuneka wenze yonke yesibini ubalo. Kuqala, qiniseka ukuba yena ke receptive. Yena basenokuba emi yi-herself okanye nge girlfriends, hayi owenza i-nzulu incoko okanye ujonge njenge yena u-funa omnye umntu. Hambani phezulu ukuze kubekho inkqubela njenge nisolko kwimishini. Emva zonke, unoxanduva. Jika kwiintlanganiso yakhe uze umxelele kwayo igama lakho. Buza yakhe ngubani igama lalo. Akukho mcimbi ngubani igama, zibalisa yakhe ngu beautiful igama. Zibalisa wakhe ukuba ufuna absolutely kuba ukufumana ke kodwa ukuba ngaba wayesazi kuwe, nento yokuba regret ke ukuba ufuna asikwazanga ubuncinane zama ukufumana yakhe inani, ngoko ke ungakwazi ukufumana ukwazi yakhe ngcono kwixa elizayo. Ndithi, ‘mna ngenene unqwenela mna ayikwazanga ukufumana ukwazi wena ngoku kwaye kubonisa ntoni elikhulu guy ndinguye, kodwa andibanga ukufumana sinyuka. Unako ndifumana yakho inani, ngoko ke sinako chonga esi phezulu kamva.’? Ukuba yena oninika yakhe inani, enkosi yakhe kwaye ndithi kuni. onemincili ukufumana ukwazi yakhe. Ngoko hamba kude ngokukhawuleza, ngathi ufuna ngokwenene ingaba uxakekile. Ukuba yena uphumelele ukuba amnike yona, nje laugh ndithi, ‘awunokwazi blame kum kuba uzama.’ Emva zonke, uthathe umngcipheko. Nekratshi ka-ngokwakho kuba usenza i-phulo. Nangona u-ngomzuzu amatye kusenokuba ngobuchule, ishumi-yesibini amatye uphumelele khange charm na kubekho inkqubela akukho mcimbi njani slick ucinga ngala. Kufuneka athabathe ngokwaneleyo ixesha angenise ngokwakho ukuze kubekho inkqubela, buza igama lalo, kwaye vumelani yakhe ngokukhawuleza khangela ukuba ukhe ubene a elihle guy yena, nento yokuba ngathi ukubona kwakhona. Ukuba uva a isemva kwi-incoko, okanye kubekho inkqubela ugcina ujonge jikelele igumbi, ukukhangela yakhe umnxeba, okanye ukuzama ukwenza iliso uqhagamshelane kunye abahlobo bakhe ngoko ke baya ngaphandle kwayo ukususela kwenu, ke wena anayithathela uphose yakho ithuba. Uxolo, umhlobo. Ngcono comment elilandelayo ixesha. Ukuba bobabini ufuna struggling ukufumana into kuthi, ngoko ke musa buza umsebenzi wakhe inani. Kutheni ingaba yena ufuna ukunika yona, ngoko uyakwazi ukuhlala kuzo awkward cwaka abanye ngaphezulu kwelinye ixesha? Ukuba yena uthi goodbye kuwe kwaye iqala ehamba kude, musa buza umsebenzi wakhe inani. Ukuba wandibulela ukuba buza, yena ange lingered. Lo ngu-a no-brainer. Ngaphandle kokuba wena sikwi ndawo phakathi esikolweni, kufuneka ubeke kwindlela yakho enkulu boy pants kwaye ucele kuye ngokwakho. Ukuba abahlobo bakho buza kuba wena, uza jonga ukuba neentloni, insecure, kwaye asiyiyo na imiceli-umntu. Ukuba kubekho inkqubela thinks nisolko hayi ukukhupha ngokwaneleyo ukuba buza kuba yakhe inombolo yefowuni, njani unako yena silindele ukuba impress yakhe xa ufuna beka phantsi ngaphandle. Abanye abantu babe cinga ke okulungileyo kuba ufuna ukuya phezulu ukuze kubekho inkqubela kwaye ndithi, ‘Owu, shoot, mna akukwazeki ukufumana yam yefowuni, ingaba khumbula ukuba ndiya kunikela ngayo a unxulumano lwefowuni oluvela yefowuni yakho.’ Ngoko ke, kubekho inkqubela uza technically kukunika yakhe inani kwaye uza ‘fumana’ ukuba yefowuni yakho kwi ncwadi yakho pocket. Yena kuyibona into uvukile kwaye iya ukuba yakho pretty esisiqhwala, ukufumana ezinye cleverness amanqaku kuba lena, kodwa ke, ngakumbi kusenokwenzeka ukuba kubekho inkqubela uza ukuba ufuna babebaninzi kakhulu cowardly ukuba buza kuba yakhe inani eqhelekileyo indlela. Kukho ngcono iindlela ukuya malunga nayo. Enye indlela yokwenza ukuba idla imisebenzi ngu zinika yakho inani lokuqala. Ukuba usebenzisa i-kwesizathu ezifana, ‘mna anayithathela onayo ukuya kwi ngomzuzu. Apha ke wam inani ukuba ufuna umnxeba okanye umbhalo kum,’ kwaye ke ulinde wakhe ukuba izakunika hers. Ukuba yena ke kunye a guy, ke mhlawumbi wakhe boyfriend okanye umyeni. Ukuba lento ayi kusoloko kunjalo kodwa lumka. Sebenzisa intloko yakho, jonga njani abo ezisebenza, kwaye yenze isigqibo ntoni ukwenza. Musa kuba besoyika ukuba nje qalisa incoko nge kubekho inkqubela ukuba yena ke ngu herself okanye nabanye abantu nokuba indoda umhlobo. Ukuba ufuna ukuhamba phezulu kuye uthi into kwaye qala ukufumana kwi incoko, yena uya kamsinya angenise kuwe. Musa kuba discouraged ukuba isicwangciso sakho akuthethi ukuba umsebenzi. I-amaxesha amaninzi uzama ecela ukuze kubekho inkqubela ke inani, ngakumbi kusenokwenzeka ukuba uza kuba ukufumana impendulo. Nceda musa xana ukujonga mnandi kwaye wear yakho eyona iingubo ukuba uceba ngomhla we-ukucela yakhe inombolo yefowuni, yena wouldn ukuba ufuna ukunika a guy yakhe inani ukuba ivumba elibi okanye jonga sloppy. Xa ufuna uthetha ukuba kubekho inkqubela ungathanda, musa usamuel malunga ofanele bathethe malunga. Thetha wakhe ngendlela efanayo ubuya thetha umhlobo. Zibalisa yakhe malunga ngokwakho kwaye ucele kuye malunga herself. Buza yakhe ngaphandle kwaye musa woyikayo ka-ukwaliwa. Ukuba yena ingaba uthi hayi, yena ayikho kukunceda kakhulu ixesha lakho. Zama ukusa kwi-xa oku kwenzeka
← Incoko Italia - Incoko kuba free ngaphandle yobhaliso
Free Dating. site Dating Italy Dating Ngesondo Ngesondo Ngesondo Dating Free Ngesondo Incoko Omdala Ngesondo Ads Ngesondo Encounters, Free Abafazi Omdala Free Ngesondo Girls →